Ukusetshenziswa komshini wokuhlunga imibala kusitshalo selayisi
Umshini wokuhlunga imibala uhlola irayisi ngamakhamera edijithali bese ususa okungcolisayo ngokuqhuma komoya omfishane ngokusebenzisa umehluko wombala. Lo mshini usetshenziswe ngempumelelo embonini yokugaya irayisi isikhathi eside.Umshini wokuhlunga imibala usetshenziswa ekuhlanzeni irayisi ukuhlanza irayisi eliphuzi ,ilayisi elimnyama nelinye irayisi elahliwe nokunye okungcoliswa ngaphakathi. Umshini wokuhlunga imibala osethuthukile namuhla ungamandla, compact,idinga ukugcinwa okuncane futhi kudla amandla amancane. Ukuhlelwa kombala sekukhulile futhi kufanele kubhekwe ukuthi kufakwe kunoma yisiphi isitshalo samanje selayisi.
Kuqhathaniswa nokudonsa ngesandla, abahleli bemibala abagcini ngokugcina abasebenzi kanye nesikhathi samabhizinisi wokufaka irayisi, ezihlinzeka ngokusebenza okuphezulu kakhulu kanye nezindleko eziphansi zokufaka, futhi sithuthukise ikhwalithi yelayisi emhlophe, izinzuzo zomnotho nezinzuzo zezenhlalo zemikhiqizo ehlungiwe, kodwa futhi asize amabhizinisi ukwakha isithombe sekhwalithi ephezulu futhi adale imikhiqizo yawo. Futhi, Kuyadingeka ukuthi ifektri yokugaya irayisi yethule abahleli bemibala ephezulu ukuze igweme ukuqedwa emiqhudelwaneni yezizwe.
Umshini wokuhlunga imibala ngenzuzo elandelayo
1.Ikhwalithi-Lomshini unekhwalithi yenguquko kwimikhiqizo yokudla. Abakhiqizi bangabheka kalula ikhwalithi yemikhiqizo futhi bavule kalula labo abasemakethe.
2.Abalawuli bokukhiqiza banganquma kalula futhi bashintshe ubukhulu bemibala nokuhlukahluka kokwehlukanisa. Lokhu kubanikeza ukulawula okwengeziwe emikhiqizweni, ngokwesibonelo ukuhlunga kwento ngezigaba eziningi.
3.Ikhono -Umshini uzenzakalelayo futhi awubuyiseli isivinini sokuhlola ikhwalithi. Eqinisweni kusheshisa inqubo yokuqinisekisa ikhwalithi yonke ngokususa imiphumela yabantu efana nokukhathala nokushaywa.
4.Ezabasebenzi – Imishini ezenzakalelayo inciphisa izindleko zabasebenzi nezinkinga zokuphatha. Futhi ifinyeza i-margin yephutha eyamukelwe ngezinga elikhulu elihlanganisa ikakhulu amaphutha abantu.
Isebenza ividiyo yomshini wokuhlunga imibala
Xhumana Nathi Ngokusebenzisa Umshini Wokuhlunga Umbala kumila yelayisi